Umvelisi oQinisekisiweyo oQinisa uMatshini, uMthengisi, uMvelisi wefektri, izixhobo zokunciphisa iintshulube, iibhokisi zebhokisi zentsimbi, iibhokisi zeeplanethi, izinciphisi zesantya, iiyantlukwano, izixhobo zomoya, iigeri zentsimbi, izixhobo zebhokisi yezolimo, iigiya zeetrektara, iigi zelori, iibhokisi zebhokisi
Umatshini wentsimbi yokuThutha ngokuchanekileyo, ii-Elements kunye ne-Backlinks yokuDibanisa
Ikhonkco le-roller elichanekileyo liyindlela efanelekileyo kakhulu yokuhambisa amandla oomatshini, athi, ngexesha lokuqeqeshwa kwezicelo zeshishini, sele ithathe indawo yazo zonke ezinye iintlobo zetyathanga ezazisetyenziswa ngaphambili.
Ikhonkco elingaphandle-Cinezela iFit (BS / DIN) yokuPhakamisa iPin Ikhonkco-Cinezela uFit (ANSI)
Ukusetyenziswa nabo bonke ubungakanani kunye neendidi zetyathanga apho kukhethwa khona okona kulungileyo Ikhonkco libonelelwa ngezikhonkwane ezithweleyo ezityibiliselwe kwipleyiti enye yangaphandle. Elinye ipleyiti yangaphandle kukuphazamiseka malunga nezikhonkwane ezithweleyo, iziphelo zazo ekufuneka ziphakanyisiwe emva kokuba ipleyiti ifakiwe. Umdlalo wokushicilela odibanisa ii-hyperlinks kufuneka usetyenziswe ngokukhawuleza nje; amakhonkco amatsha angasemva kufuneka asetyenziselwe ukutshintshisa ii-hyperlink ezichithakeleyo. (Jonga 'ukuKhangela ngeTyathanga elingapheliyo' ngemiyalelo epheleleyo).
Ukuqhagamshela ikhonkco-iSlip Fit (BS / DIN / ANSI)
Ikhonkco elinxibelelanayo elinikezwe izikhonkwane ezibini ezidityanisiweyo ezibekwe kwipleyiti yangaphandle. Icwecwe elingaphandle lihlala likumdlalo ocacileyo kwizikhonkwane zokuxhuma kwaye ukhuseleke endaweni ngepini yokwahlulahlula ngokugqibezela ipeyinti nganye yokuqhagamshela.
Ukuqhagamshela iwebhusayithi ikhonkco-iSlip Fit (BS / DIN / ANSI)
Isetyenziswe kumatyathanga amafutshane e-pitch kuphela. Ukubonelelwa ngezikhonkwane ezibini ezidityanisiweyo ezityikitywe kwipleyiti engaphandle, ipleyiti yokudibanisa ukucoceka ikhuselwe ngendlela yekliphu yasentwasahlobo, enguNombolo 27, efikelela kwimingxunya engaphakathi kwezikhonkwane.